अत्यावश्यक सवारी पासमा मन परी सचेत नभए ठुलो दुर्घटना – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNewsअत्यावश्यक सवारी पासमा मन परी सचेत नभए ठुलो दुर्घटना
अत्यावश्यक सवारी पासमा मन परी सचेत नभए ठुलो दुर्घटना
चैत्र १६ पोखरा :
विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको कारण त्रास फैलिएको छ । करिब २१ भन्दा बढी देशले लकडाउन गरेको अवस्थामा घरभित्र मानिस बसिरहेका छन् । नेपालमा पनि लक डाउन सुरु भएको करिव ६ दिन भएको छ ।
पोखरा लेकसाईडमा रहेका केही पर्यटन व्यवसायीहरुले अत्यावश्यक कामका लागी सरकारबाट लिएको पासको समाजीक संजालमा विज्ञापन गरीरहेको देखिन्छ । अत्यावश्यक काम को लागि आफ्नो संस्था र पदको प्रयोग गर्दै पास बनाएका केही पर्यटन व्यवसायीहरुले राज्यले अत्यावश्यक सेवामा मात्रै प्रयोग गर्न दिएको पासको दुरुपयोग गरेको पाईन्छ ।
सरकारले आवश्यक कामको विवरण खुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गरिएको निवेदन ल्याएको खण्डमा पास दिने गरे सँगै पास लिएकाहरुले सामाजिक संजालमा जतिबेला पनि सवारी साधन उपलब्ध हुने जानकारी सहित सम्पर्क नम्बर पनि दिइएका छन् । यस्ता सूचना जारी भएपछि पर्यटन व्यवसायीहरुबाट विरोध आएको देखिन्छ ।
एक पर्यटन व्यवसायी भन्छन् अत्यावश्यकीय सामान ढुवानी गर्ने निहुमा प्रशासनबाट दिइने सवारी पासको दुरुपयोग गरी विपदको बेलामा लुट मच्चाइरहनु यसरी राज्यलाई नै च्यालेन्ज गरि रहनु, पैसा कमाउन कोहि मैका छोपिरहनु एक किसीमको मानवीय अपराध हो यस अपराधमा सरकारको चाँडो नजर पुगोस । उनले सामाजिक संजालबाट यस्ता पासहरु जफत हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
पास लिएका सवारी साधनले पटक पटक धेरै मान्छेलाई यसरी संख्यात्मक रुपमा सर्भिस दिदाँ संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ । एकै सवारीमा धेरै मान्छे हिँड्ने र यदि कुनै व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भए त्यसको असर सवैमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
लकडाउन त सोझा जनता र खाना नपाउने का लागि मात्र लगाईदो रहेछ ? नेपालमा २ बर्गका मानीस बस्ने गर्दछन एक हुने खाने, अर्को हुँदा खाने कहाँ छ प्रहरी प्रशासन ? अनि अनुगमन गर्ने टोली ?
उता कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारी साधनहरुलाई सवारी पास दिइएको र यसको दुरुपयोग भए कडा कारबाही गर्ने बताए । अत्यावश्यकका काममा आउजाउ गर्नेबाहेक कसैको आग्रहमा पास वितरण नगरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको दाबी छ ।
सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले समेत सूचना जारी गर्दै एक साता सम्मका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सार्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले यस अघि २५ जना भन्दा बढी व्यक्ति एकै ठाउँमा भेला हुन् नपाउने भनि निर्णय समेत गरेको थियो ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म ५ जनामा देखिसकेको छ भने एक जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । संक्रमित पाँचै जना विदेशबाट नेपाल फर्केका हुन्।
हाल विश्वमा ३०८७५ जनाको मृत्यु भैसकेको छ भने ६६५६१६ संक्रमित भएका छन् तेस्तै १४१७४६ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
बिदशेबाट आउन सम्पूर्णलाइ सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्दा अझै देशमा संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रुपमा बढ्न सक्ने देखिन्छ ।